I-Family Friendly, i-150m2 Flat, i-Copenhagen Vesterbro
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguStine
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uStine iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Igumbi elimangalisayo le-150 leemitha zesikwere esisembindini kakhulu, kufutshane neSikhululo sikaloliwe esiseMbindini/Tivoli/Strøget kunye neDistrictpacking yesithili/iikhefi ezixhaphakileyo kunye neeresityu. Indawo ephangaleleyo kwaye intle icaba eVesterbro, eyona ndawo intle yaseCopenhagen!
Iflethi yi-150 square metres kumgangatho wesibini. Ukukhanya kwemini eninzi.
Kukho igumbi lokutyela elikhulu kunye negumbi lokuhlala elibanzi. Amagumbi okulala amathathu, elinye ligumbi lokulala elikhulu elinebhedi ephindwe kabini, kunye namagumbi amabini ongezelelweyo anebhedi enkulu.
Ikhitshi linendawo encinci yokuhlala kwaye ixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nomatshini wokuhlamba izitya.
Indlu yokuhlambela ineshawa kunye nomatshini wokuhlamba, i-wile yangasese ikwigumbi elahlukileyo.
Uya kuba nokufikelela kwi-Intanethi yasimahla kunye negadi yethu emangalisayo ekwabelwana ngayo. Egadini kukho i-aria yokudlala kunye nezibonelelo zebarbecue, ilanga elininzi apho.
Ukuthenga okuninzi kwalapha ekhaya, imivalo kunye neendawo zokutyela kwindawo ebizwa ngokuba yiVesterbro. IVesterbro yenye yezona ndawo zintle zehip arias eCopenhagen. Iimitha ezimbalwa ukusuka kwiflethi ungayonwabela ezinye zezona ndawo zokutyela zibalaseleyo, iibha zediliya, iibha zebhiya, nokunye! Kukho iimarike ezininzi kunye nemicimbi yenkcubeko kwi-aria. Kufutshane ungafumana indawo yokuhlambela, ecaleni kolwandle lwaseCopenhagen.
Umbuki zindwendwe ngu- Stine
ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi xa kufuneka :)
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R2426